विज्ञान प्रविधि – Page 10 – erupse.com
दुनियाँभर यस्तो देखियो सबैभन्दा लामो चन्द्रग्रहण (फोटोफिचरसहित)
शनिबार, साउन १२, २०७५ मा प्रकाशित
सबैभन्दा लामो समयसम्म देखिएको चन्द्रग्रहण विश्वका अधिकांश भागमा देखिएको छ। उत्तर अमेरिकाबाहेक अधिकांश मुलुकबाट गएराति चन्द्रग्रहण देखिएको हो । यो चन्द्रग्रहण एक घण्टा ४३ मिनेट पूर्ण चन्द्रग्रहणका रुपमा रहेको थियो। यो शताब्दीको सबैभन्दा लामो पूर्णचन्द्रग्रहण राति देखिएको हो । यो..
शताब्दीकै लामो चन्द्रग्रहण आज
शुक्रबार, साउन ११, २०७५ मा प्रकाशित
शुक्रबार राति यो शताब्दीकै लामो खग्रास चन्द्रग्रहण लाग्दै छ । ३ घण्टा ५५ मिनेट रहने ग्रहण नेपालबाट देख्न सकिन्छ । राति १२ बजेर ९ मिनेटमा ग्रहण सुरु हुनेछ भने १ बजेर १५ मिनेटमा चन्द्रमा पूरै ढाकिनेछ । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा याे खबर छ – ४ बजेर ४ मिनेटमा ग्रहण सकिनेछ । राति सवा १ बजेदेखि ३ बजेसम्म..
इन्टरनेटको मूल्य घट्यो
बिहिबार, साउन १०, २०७५ मा प्रकाशित
सरकारले दूरसञ्चार कर लगाएपछि बढाइएको इन्टरनेटको मूल्य पुन घटेको छ । अब इन्टरनेटको मूल्य असार मसान्सम्मकै अवस्थामा रहने छ । सरकारले दूरसञ्चार कर थपेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुले साउन १ गतेदेखि इन्टरनेटको मूल्य बढाएका थिए । मूल्य बढेपछि चौतर्फी विरोध भएपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले..
मंगल ग्रहमा भेटियो पानीको ताल
अन्तरिक्षयानबाट राडार उपकरण प्रयोग गरी तस्बिर लिँदा मंगल ग्रहमा ताल फेला परेको छ। यससँगै वैज्ञानिकहरुले त्यहाँ जीवनको अस्थित्व हुन सक्ने बलियो आधार मिलेको बताएका छन्। उक्त ताल १२ माइल ९२० किलोमिटर० व्यासको छ। मंगल ग्रहको दक्षिणी ध्रुवीय इलाकामा पाइएको नुनको लेदोसहितको ताललाई बरफले ढाकेको..
नेपाल एसियामा इरान पछिको सस्तो ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा दिने मुलुक
मङ्लबार, साउन ८, २०७५ मा प्रकाशित
साउन १ गतेदेखि सरकारले दुरसञ्चार सेवा दस्तुरमा पहिलो पटक इन्टरनेटलाई पनि समेटेको हो । सरकारले बढाएको मूल्यको भार अन्तमा सर्वसाधारणलाई पर्ने भएकाले अहिले सेवा महंगो भएको गुनासो आउन थालेको छ । सरकारले इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत सेवा दस्तुर थप गरेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले मूल्य बढाएका..
गुगलमाथि इतिहासकै उच्च जरिवाना, एकाधिकारको अभियोगमा साढे ५ खर्ब तिर्नुपर्ने
शुक्रबार, साउन ४, २०७५ मा प्रकाशित
सूचना प्रविधि कम्पनी गुगलमाथि ५ खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । मोबाइल अपरेटिङ सिस्टम एन्ड्रोइडमाथि ४ अर्ब ३४ करोड युरो जरिवाना भएको हो । इन्टरनेट सर्चमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्नका लागि अवैधानिक रुपमा प्रयोग भएको अभियोगमा युरोपेली आयोगले गुगलमाथि यति ठूलो रकम जरिवाना..
पाँच हजार वर्षअघि हिममानवले के के खान्थे ?
बुधबार, साउन २, २०७५ मा प्रकाशित
पाँचहजार बर्ष अघि हिम मानवहरुले के खान्थेहोला भन्ने रहस्यलाई वैज्ञानिकहरुले अध्ययन गरी निश्कषृ निकालेका छन् । त्यतीखेर हिम मानिशले बाख्राको बोसो, मृगको मासुका साथै प्राचीन गहुँ र एक जातको उन्यू खाने गरेको अनुसन्धानमा संलग्न बैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । ओएट्जी नाम दिइएका हिममानवको अन्तिम भोज..
यसरी बनाए १० कक्षामा पढ्ने बुटवलका दाजुभाइले बोल्ने रोबोट
शनिबार, जेष्ठ १२, २०७५ मा प्रकाशित
प्रकाश आचार्य बुटवल, १२ जेठ -विद्यालय उमेर समूहका विद्यार्थीले पढ्ने समयमा चलचित्र हेर्नु हुँदैन, मोबाइलमा नेट चलाउनु हुँदैन भन्ने आम अभिभावक र शिक्षकहरूका लागि रूपन्देहीका दुई जुम्ल्लाहा दुई दाजुभाइले गतिलो जवाफ दिएका छन् । उनीहरूले चलचित्र हेरेर र इन्टरनेटको माध्यमबाट रोबोट (यन्त्र मानव)..
बिहिबार, जेष्ठ १०, २०७५ मा प्रकाशित
बागलुङ, १० जेठ– जिल्लाका दुई दुर्गम गाउँमा पहिलोपटक मोबाइल सेवा पुगेको छ । गलकोट नगरपालिका–१० को रमुवा र बडीगाड गाउँपालिका–८ खोलाखर्कमा नेपाल टेलिकमले सेवा विस्तार गरेको हो । सदरमुकामदेखि २० कोष पश्चिममा अवस्थित ती दुवै ठाउँमा यसअघि कुनै पनि कम्पनीको ‘जिएसएम’ मोबाइल सेवा पुग्न सकेको थिएन ।..
फेसबुक धेरै चलाउदा मानसिक रोगी हुनु होला !
केपी शर्मा ज्ञवाली यसो एक छिन एउटा साथीसँग कुरा गर्छु भनेर म्यासेन्जर खोलेको थिएँ। अर्को तिर एउटा म्यासेज आयो। इनबक्स खोलेँ। १ सय १२ बाह्र जनाको ग्रुप रहेछ त्यो। मेरो साथीको नामबाट एउटा भिडियो आएको रहेछ मैले लिंकमा क्लिक नगरेरै थाहा पाएँ। त्यो भिडियो अश्लिल हो उत्तिखेरै अरु साथीहरुले पनि त्यसमा..